Ny onja fahatelo izay nanimba ny drafitra fanombohana ny fizahan-tany any Thailandy - aiza isika izao? | Vaovao momba ny dia any Thailand
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Safety • Vaovao momba ny dia any Thailandy • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao mivalona
Ny onja fahatelo izay nanimba ny drafitra fanombohan'ny fizahan-tany any Thailandy - aiza isika izao?
Ny onja fahatelo mamely ny drafitra fanombohana ny fizahan-tany any Thailandy - aiza isika izao?
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Ny onja fahatelo izay nanimba ny drafitra fanombohan'ny fizahan-tany any Thailandy - aiza isika izao?
Faritany Thai valo ambin'ny folo no nambara fa faritra mena, miaraka amina fanidiana vitsivitsy ary mijanona am-pilaminana ny filaminany
Phuket dia mitolona amin'ny fiarovana ny nosy iray manontolo aorian'ny fiatoana fahatelo an'ny COVID-19
Ireo vaksinina dia tsy maintsy hatokana any amin'ny faritany hafa koa haingana mba hanampiana amin'ny ady amin'ny valanaretina farany
Nanapa-kevitra ny tsy hiraharaha ny fampitandremana ataon'ny manam-pahaizana ny governemanta Thai ka namela ny fialantsasatra Songkran handeha
Thailand Ny minisitra dia misaintsaina ny dingana manaraka hanombohana indray ny indostrian'ny fizahan-tany goavambe, natao tamin'ny 1 Jolay 2021 tany Phuket. Ny drafitra dia mety mila havaozina satria i Phuket dia miady amin'ny fanaovana tsindrona matevina ny nosy iray manontolo aorian'ny fikafana fahatelo. Phuket, talohan'ny onja fahatelo dia efa nahazo doka maherin'ny 100,000 ary nikasa ny hahazo doka 930,000 fanampiny amin'ny volana Jona. Ampy ho an'ny 70% amin'ny mponina izany - ny tanjona ilaina hahatratrarana ny tsimatimanota amin'ny omby. Ny fiakaran'ny tranga COVID-19 dia nanelingelina ity drafitra ity, satria ny vaksinina dia tsy maintsy hatokana any amin'ny faritany hafa ihany koa mba hanampiana amin'ny ady amin'ny valan'aretina farany.
Tsy kivy, ny minisitry ny fizahantany sy ny fanatanjahantena Pipat Ratchakitprakarn dia nilaza fa mikasa ny hihaona amin'ny herinandro ambony miaraka amin'ireo masoivoho mifandraika rehetra izy hiady hevitra momba ny drafitra fanokafana indray, izay efa napetraka tamin'ny Jolay tamin'ity taona ity. Valo ambin'ny folo faritany izao no nambara fa faritra mena, miaraka amina fanidiana hidin-trano ary hijanona ao amin'ny filaminan'ny trano. Ny fampitandremana fanairana koa dia nampiakarina nanerana ny faritra sisa tamin'ny firenena tamin'ny volomboasary, tany amin'ireo faritany 59 ambiny izay maro amin'izy ireo dia efa maitso ary noheverina ho azo antoka.
Nanapa-kevitra ny tsy hiraharaha ny fampitandremana ataon'ny manam-pahaizana ny governemanta, navelany handeha ny fialantsasatra Songkran, ary nanampy andro iray fanampiny aza. Saingy tsy nisy famoriam-bahoaka na famafazana rano navela. Songkran dia fankalazana ny taom-baovao Thai izay matetika maharitra 3-4 andro, mitarika amin'ny fifindra-monina an-tanàn-dehibe toa an'i Bangkok.
Tamin'ny taon-dasa, noho ny COVID-19, nofoanana ny fialantsasatra. Vokatry ny fialantsasatra tamin'ity taona ity, valan'aretina vitsivitsy tany Bangkok no namela ny valanaretina hiparitaka be. Ny valan'aretina Bangkok dia nifantoka tamin'ny toerana fialamboly; trano fisakafoanana sy trano fisotroana fisotroana fisakafoanana ary alim-pandihizana manodidina ny faritr'i Thonglor, miampy fampakaram-bady amina fiarahamonina avo ao amin'ny hotely amoron-drano vaovao, izay ahitana ny Minisitry ny governemanta sy ny mpitarika ara-barotra malaza. Ny viriosy COVID avy amin'ireto toerana mafana ireto dia niparitaka haingana nanerana ny firenena, rehefa niverina tany an-tranony ny olona nandritra ny fialantsasatra. Mampalahelo fa tafio-drivotra tonga lafatra amin'ny fanaparitahana ilay virus io. Hatramin'io fotoana io, hatramin'ny nanombohan'ny areti-mifindra, Thailand dia 28,889 ny tranga ary 94 no maty raha tsy tamin'ny 1 aprily 2021. Valo ambin'ny folo andro taty aoriana dia tafakatra 43,742 izany ary 104 no maty. Fisondrotana tranga 51 isan-jato.